I-Chester Village Getaway - I-Airbnb
I-Chester Village Getaway
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Dianne
Itholakala khona kanye edolobhaneni laseChester! Siseduze ne-Lordly Park, futhi uhambo lwemizuzu emithathu kuphela ukuya e-Yacht Club, i-Lido Pool, i-Chester Playhouse, i-Frieda's Beach, ne-Foc'sle Tavern. I-Chester Golf Club ingamamitha amahlanu ukusuka lapho.
I-Chester iyimizuzu engama-45 ukusuka eHalifax futhi indawo enhle ongahlala kuyo uma uya eSouth Shore. Uhambo losuku oluya e-Lunenburg, e-Mahone Bay, noma uhambe ngomkhumbi uye kwesinye seziqhingi eziningi eziseduze.
Ikhaya lethu lilungele umndeni noma iqembu labangane ukubaleka!
Indlu inamazinga amathathu. Amakamelo okulala amabili kanye negumbi lokugeza eligcwele phezulu, elivulekele igumbi lokuhlala elikhulu. Izinga elikhulu linomqondo ovulekile wokuhlala / yokudlela / ikhishi, kanye nomhume (igumbi le-TV) nokugeza okuhhafu. Isitezi esiphansi sinendawo yokungena ehlukile enegumbi lokulala, ukugeza okugcwele, i-washer / dryer, kanye negumbi lokuhlala.